कविता ‘झर’ को सैद्घान्तिक विर्मश तथा विकासक्रम
सुरेश काफ्ले ‘विदारक’ १. विषय प्रवेश वाङ्मय भनेको सन्तुलित प्रकृतिमा जीवनशैली स्थापित गर्ने विषय हो । सृष्टिको आरम्भदेखि सभ्यतासँगै समाजलाई गति दिने विषय पनि वाङ्मयलाई नै मानिँदै आएको छ ।
साहित्यकार किरातीको ‘फिक्कलको उकालो’ आउँदै
न्युज अफ नेपाल,काठमाडौँ । राजनीतिकर्मी तथा साहित्यकार मिलनकान्छा किरातीको निवन्ध सङ्ग्रह फिक्कलको उकालो पाठकसामु बजारमा आउने भएको छ । एकसय सत्तरी पृष्ठको उक्त सङ्ग्रह इन्डिगो इन्क प्रकाशन गृह, काठमाडौँले प्रकाशन
लेखक – समुन्द्रा शर्मा, ईटहरी । १- जीवनको सुन्दरता कर्ममा निर्भर हुन्छ । २- भाग्यले भन्छ कहिले हार नमान्नु । ३- प्रेम सिसा हो जतन गर्नु पर्छ। ४- घृणा नगर्नु
काठमाडौ । नेपाली आम महिलाले भोग्नु परेको पिडालाई उजागर्न खोजिएको छ अधबैंसे आईमाई उपन्यासमा । लेखिका बिमला हुमागाइले लेख्नु भएको उक्त उपन्यासमा एउटा पुरुष आफु नपुंशक भएको खवर आफन्तलाई भन्न
न्युज अफ नेपाल,काठमाडौँ । नेपालमा परम्परागत तथा मौलिक लोकबाजा सम्बन्धी अहिलेसम्म कुनै आधिकारिक पाठ्यसामग्री तयार हुन सकेका थिएनन् । तर, अब भने यस्तो पाठ्यसामग्री तयार हुने भएको छ । नेपाल
दीपक रिजाल । झ्यालखानामा तिम्रो मनलाई थुन्न पाए हुन्थ्यो धोका दिने तिम्रो बानी, सुध्रिजाओस् भनी मायाको त पुजारी हुँ, धाउँछु मन्दिर पनि । तिम्लाई माया गर्ने मुटु फेर्न पाए हुन्थ्यो
न्युज अफ नेपाल,काठमाडौँ । नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानले ‘युद्धबन्दी गोर्खाली सैनिकका लोकगाथाहरू’ प्रकाशित गर्ने भएको छ । आजभन्दा एक सय वर्षअगाडि प्रथम विश्वयुद्धमा जर्मनीमा युद्धबन्दी बनाइएका गोर्खाली सैनिकहरूका आवाजमा रेकर्ड गरिएका लोकसामग्रीहरूको
न्युज अफ नेपाल,काठमाडौँ । नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानबाट ‘प्रज्ञा नेपाली शैक्षणिक व्याकरण’ प्रकाशित हुने भएको छ । नेपाली भाषा शिक्षणमा एकरूपता कायम गर्न र पठन पाठनमा सहजता ल्याउने उद्देश्यले प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको भाषा ९नेपाली
प्रकाशकुमार सिग्देल चारो खोज्न गाको चरी, विचल्लीमा परी गुँढमै फर्कि आएँ छल्न हावा हुरी झरी टेक्ने हाँगो मक्किदो छ तिम्रै भरमा हरि माया यो माटोलाई सधैंभरी होइन घरि घरि छैटीको
न्युज अफ नेपाल,काठमाडौँ । नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानले ‘नेपाली कविताको प्रादेशिक इतिहास’ तयार पार्ने भएको छ । प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको साहित्य (पद्य/काव्य) विभागबाट यस्तो इतिहास तयार पारिन लागिएको हो । विभागका प्रमुख प्राज्ञ प्रा.डा.
न्युज अफ नेपाल, काठमाडौँ । कवि तथा समालोचक सुरेश हाचेकालीलाई नेपाली कलासाहित्य डटकम प्रतिष्ठानले ‘एनएलजी कलाश्री सिर्जना पुरस्कार–२०७७’ प्रदान गरेको छ । प्रतिष्ठानद्वारा हरेक वर्ष प्रदान गरिने ‘एनएलजी कलाश्री सिर्जना
न्युज अफ नेपाल,काठमाडौँ । नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानले ‘सृष्टिका कथा’ प्रकाशन गर्ने भएको छ । प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको बालसाहित्य तथा लोकवार्ता विभागले मानिसका विभिन्न जाति र तिनका थरका उत्पत्तिकथामा आधारित लोककथा ‘सृष्टिका कथा’ प्रकाशन
न्युज अफ नेपाल, काठमाडौँ । नेपाली कलासाहित्य डटकम प्रतिष्ठानले विगत ११ वर्षदेखि नियमित रूपमा प्रकाशित गर्दैआएको ‘कलाश्री’ साहित्यिक वार्षिक पत्रिकाको २०७७ सालको अङ्क प्रकाशित भएको छ । एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी